တရုတ် ၏အွန်လိုင်း ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေသည် Alibaba တွင် နံပါတ် ၁ နှင့် Xiaomi တွင် နံပါတ် ၈ ဖြစ်သည် - Pandaily
တရုတ် ၏အွန်လိုင်း ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေသည် Alibaba တွင် နံပါတ် ၁ နှင့် Xiaomi တွင် နံပါတ် ၈ ဖြစ်သည်
Beijing Zhongguancun Interactive Marketing Laboratory နှင့် PricewaterhouseCoopers (PWC) တို့သည် ကြာသပတေး နေ့တွင် ပူးတွဲ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်“ 2021 တရုတ် အင်တာနက် ကြော်ငြာ ဒေတာ အစီရင်ခံစာ” .
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်တာနက် လုပ်ငန်း သည် ပြည်တွင်း စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအား တိုးတက်လာ ခြင်းမှ အကျိုးဖြစ်ထွန်း ခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး သည် ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေ ယွမ် ၅ ၄၃. ၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅. ၆ ဘီလီယံ) ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၉. ၃၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တိုးတက် မှုနှုန်းသည် ယခင်နှစ် ထက် ၄. ၅၃% ကျဆင်းခဲ့သည်။ အင်တာနက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကဏ္ of ၏စုစုပေါင်း အရွယ်အစား မှာယွမ် ၆ ၁၇. ၃ ဘီလီယံ ခန့်ရှိပြီး နှစ်စဉ် ၁၂. ၃၆% တိုးလာပြီး ကြော်ငြာ စျေးကွက် တစ်ခုလုံး မှာယွမ် ၁ ၁၆၀. ၈ ဘီလီယံ ရှိပြီး ယခင်နှစ် ထက် ၁၁. ၀၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်တာနက် ကြော်ငြာ စျေးကွက် ၏အာရုံစူးစိုက် မှုသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် တိုးတက် လာခဲ့ပြီး Alibaba ကဲ့သို့ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုသည် ဈေးကွက် ဝေစု ၏ ၉၄. ၈၅% ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ လေး ခု၏ စျေးကွက် ဝေစု သည် ၇၈. ၂% သို့ ထပ်မံ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ များအနက် Alibaba, Bytedance နှင့် Tencent တို့သည် ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေ၏ ထိပ်ဆုံး သုံး ခုတွင် ပါဝင်ပြီး ပထမ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု သည်ယွမ် ဘီလီယံ ၁၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့သည်။ Baidu ၏ ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကျဆင်း ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တိုးတက်မှု ပြန်လည် စတင်ခဲ့ပြီး စတုတ္ထ နေရာတွင် ရပ်တည် ခဲ့သည်။ ပဉ္စမ မှ ၁၀ ခုမြောက် ကုမ္ပဏီ များမှာ JD.com, Meituan, Fast Hand, Xiaomi, Weibo နှင့် Puduo တို့ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:TikTok သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ကြော်ငြာ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ ရရှိရန် ရည်မှန်း ထားသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပလက်ဖောင်း ၀ င်ငွေ အချိုးအစား အရ e-commerce ပလက်ဖောင်း များသည် ကြော်ငြာ လိုင်း များတွင် ထိပ်ဆုံး နေရာတွင် ဆက်လက် ရှိနေပြီး စုစုပေါင်း စျေးကွက် ဝ င်ငွေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ရှိသည်။ ဗီဒီယို ပလက် ဖော င်း၏ ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေသည် ၃၀. ၂၈% အထိ ဆက်လက် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စျေးကွက် ဝေစု မှာ ၂၁. ၆၆% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ တတိယ နှစ် ဆက်တိုက် ရှာဖွေရေး ပလက် ဖော င်းသည် ကြော်ငြာ ဝ င်ငွေနှင့် စျေးကွက် ဝေစု ကျဆင်းခဲ့ပြီး ကြော်ငြာ ဝ င်ငွေသည် ၁၀. ၄၃% ရှိသည်။ လူမှုရေး ပလက် ဖော င်း၏ ၀ င်ငွေ၏ စျေးကွက် ဝေစု သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၉. ၇၇% ဖြင့် တည်ငြိမ် ခဲ့သည်။